Mianara mampiasa ny fitaovana Pen amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Mianara mampiasa ny fitaovana Pen amin'ny Photoshop
Jose Angel | | General, Tutorials, Cartoon vector
Indraindray isika dia mametra ny fampiasantsika fitaovana noho ny fahalalantsika azy ireo. Ho an'ireo izay manam-pahaizana momba ny lohahevitra dia hahita a tsy misy farany ny fahafaha-manao famolavolana amin'ny alàlan'ny Photoshop, Illustrator, Indesign, sns. Saingy tsy misy fisalasalana, ho an'ny ankamaroantsika, tsy fantatsika zato isan-jato ny fahafaha-manolotra programa iray amin'ireo toetra ireo. Hanome maro amin'izy ireo ny fitaovan'ny penina.
Isaky ny manandrana milalao fitaovana iray na iray hafa isika dia miafara amin'ny famoahana mahita fa ny tanjonay efa voapetraka ao an-tsaintsika dia tsy ho voasambotra amin'ny lamba tsy misy bika. Ary noho izany antony izany dia mitady safidy hafa isika, amin'ny ankamaroan'ny tranga, tsy dia manintona noho izay noeritreretinay tany am-boalohany. Izany no antony hiezahantsika hianatra ny fomba fampiasana ireo lalana.
1 Inona avy ireo lalana?
2 Andao hianatra amin'ny fitaovana Pen
3 Hampiasa ny Freeform Pen Tool isika
4 Mitovy amin'ny penina maimaim-poana, fa andriamby
Inona avy ireo lalana?
Ny làlana dia mamela antsika hanoritra fiolahana sy tsipika izay novaina sy adika ho zavatra vector. Ny sosona endrika dia azo ampiasaina amin'ny fitaovan'ny Pen sy ny fitaovana Shape. TAzontsika atao koa ny mamorona làlana hiseho ho toy ny lalan'ny asa ao amin'ny tontonana "Paths". Farany hanana ny fahafaha-mamorona endrika voahitsakitsaka azontsika lokoko.
Rehefa mpampiasa Photoshop ianao, ny mombamomba ny contouring miaraka amin'ity fitaovana ity hanesorana ireo fiaviana dia mahazatra antsika. Ho an'ireo mpampiasa Adobe Illustrator, ny fampiasana ny fitaovana Pen dia tena ilaina amin'ny fanomezana lalana marina sy famoronana endrika am-boalohany. SIlaina ihany koa izy amin'ny fanaovana safidy, satria ny valiny dia mety ho marimarina kokoa.
Rehefa mamorona làlana iray izahay, dia mamaritra faritry ny vatofantsika isaky ny tsindry ataonao, ary koa ny tsipika fitarihana izay miafara amin'ny teboka iray ny fiafarany raha lalana miolaka izy io. Ny ampahany eo anelanelan'ny teboka vatofantsika roa dia ampahany. Mahitsy na miolaka. Ny lalana iray dia afaka misokatra ary misy faran'ny na mihidy, ary mety boribory io.
Ireo làlan'ny Photoshop dia azo aondrana any amin'ny Illustrator.
Andao hianatra amin'ny fitaovana Pen
Manokatra photoshop izahay, mamorona antontan-taratasy banga vaovao na sary efa voafaritra mialoha. Misafidy ny fitaovana penina ao amin'ny tontonana fitaovana na mivantana amin'ny alàlan'ny fanindriana 'P' isika. Na dia efa fantatsika rehetra aza izany. Ao amin'ny tontonana fitaovana dia hanana safidy maromaro isika: Path, endrika ary piksel.
hay fantarina: Ny fitaovana Pen dia hamorona làlana miasa vector izay hiseho ao amin'ny lisitra ao amin'ny tontonana. Mba tsy hahavery ireo lalana noforoninay rehefa nanidy ny antontan-taratasy resahina isika dia tsy maintsy mamonjy azy.
endrika: Ity fitaovana ity dia hamorona sosona endrika. Azontsika atao ny manitsy ny lokon'ny endrika araka ny itiavantsika azy, amin'ny fampiasana azy tsirairay avy. Tsindrio indroa ny sary kely an'ny tontonana 'Layers'. Manampy koa ny vokatra toy ny 'Drop Shadow', 'Bevel and Emboss', sns.
teboka: Araka ny ho hitanao dia tsy mandeha foana io safidy io. Raha manondro ireo fitaovana miendrika endrika ianao dia hovohana. Izy io ihany no miasa. Rectangle, ellipse, custom sns. Mamorona sosona pixel fa tsy sosona azo ovaina.
Hampiasa ny Freeform Pen Tool isika
Ity fitaovana maimaimpoana maimaimpoana ity dia ahafahantsika manoritra sary freehand haingana. Napetraka ho azy ireo teboka vatofantsika ary afaka mamerina manitsy isika avy eo. Hisafidy ny fitaovana 'Freeform Pen' avy amin'ny tontonana fitaovana isika.
Araka ny efa natombokay teo aloha, afaka mamorona sosona Shape na Path isika ao amin'ny bara safidy ambony. Mba hanoritana sary dia tsindrio fotsiny ary sintomy toy ny pensilihazo tsotra, ary rehefa vita ny sary dia alefaso ny bokotra. Mitovy tsy misy valaka amin'ny sary freehand.
Raha namoaka ny bokotra ianao alohan'ny nanidiana ny endrika na ny làlana, kitiho indray ny faran'ny làlana iray ary sintomy.
Mitovy amin'ny penina maimaim-poana, fa andriamby
Ity fitaovana ity dia ampiasaina amin'ny fomba mitovy amin'ny loopan'ny andriamby. -izay horesahintsika ato aoriana ao amin'ny lahatsoratra iray hafa momba izany- manaraka tsara araka izay azo atao ny drafitry ny singa sary.
Mba hidirana amin'ilay fitaovana, tsindrio maimaimpoana ary tazonintsika ny penina, noho izany ny lohateny. Ary raha vantany vao vitantsika izany, eo amin'ny baran'ny safidy ambony, dia tsindrio ny 'magnet'. Ary ho hitanao ny fiovan'ny pointer. Amin'ity fitaovana ity dia azontsika atao ny misafidy ny kisary 'tool', manitsy ny fandeferana eo anelanelan'ny 0,5 sy 10. Ampidiro ny sanda eo anelanelan'ny 1 sy 256 teboka mba hamaritana ny faritra misy ireo fizahana.
Azontsika atao ny mamaritra ny isan-jaton'ny mifanohitra faran'izay kely indrindra amin'ny detection contour. Mampiasa sanda ambony ho an'ny sary mifanohitra ambany. Hamarino ny fahitana ny contours amin'ny alàlan'ny fametrahana sanda eo anelanelan'ny 0 sy 100 amin'ny sehatry ny linearity. Arakaraka ny maha ambony ny sanda no mahamaika ny tahan'ny fametrahana ny isa.
Manamarika ny safidin'ny penina Pen isika, indrindra raha mitana takelaka sary ivelany isika hanovana ny sakany arakaraka ny tsindry hataontsika. Raha tsy manana an'ity fitaovana ity isika dia tsy ho sarotra kokoa ny manao azy a trackpad na totozy mahazatra.
Azonao atao ny mampiasa endrika maro hafa miaraka amin'ilay fitaovana manety, toy ny fanaovana sary freehand toy ny penina maimaimpoana. Tsindrio ary tsindrio ALT amin'ny PC na CMD amin'ny Mac. Mariho fa tsy dia ilaina loatra io safidy io, satria amin'ny Freeform Pen dia azonao atao mivantana izany, saingy safidy hafa io. Azonao atao ny manisy fizarana mahitsy, manindry ny ALT na CMD amin'ny iray amin'ireo tampony ary manidy azy aza, manindry amin'ny teboka iray hafa amin'ilay fizarana.
Ampidiro amin'ny fampiharana anao ireo safidy rehetra ireo ao anatin'ny fitaovan'ny Pen, afaka mahazo marimarina kokoa ianao ary misy vokany bebe kokoa amin'ny endrika noforoninao. Ankehitriny, tsindrio ilay fitaovana ary manomboka manomboka ny fizotranao amin'ny famoronana, io ihany no hahitanao ny fampiharana ny teoria rehetra izay nohazavainay teto. Manao fitsarana sy hadisoana na inona na inona fahasimbana.
Ireo torolàlana ireo dia afaka manome anao hevitra, saingy tsy afaka manao ny asa ho anao izy ireo, hahafahanao mahafantatra ny tsirairay amin'izy ireo ary mampahafantatra ny tenanao. Ary manontany mihitsy aza raha manana fanontaniana ianao, ny mpiara-miasa hafa dia afaka mamaha izany olana izany. Azonao atao ihany koa ny manorim-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasana endrika efa voafaritra fotsiny ary apetrakao eo anelanelan'ny sarotra ny Pen, izany, na ahalavorary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Mianara mampiasa ny fitaovana Pen amin'ny Photoshop
Google dia nanala ny bokotra "Jereo ny sary" amin'ny valin'ny fikarohana
Collage ny zavakanto amin'ny famoronana sary amin'ny fomba frankenstein